तातो तेलमा परि घाइते वालिकाको उपचार अस्पतालले निशुल्क गर्ने / आर्थिक संकलन रोक्न आफन्तको आग्रह
By vijayafm on	 January 21, 2019 देश, फोटो फिचर, विविध खबर, स्थानीय
गैंडाकोट, ७ माघ ।
तातो तेलमा परि घाईते भएकी गैंडाकोट ३ ढोडेनीकी २२ महिने बालिका सिम्रन पौडेलको स्वास्थ्य उपचारका लागि थालिएको आर्थिक सहयोग कार्य रोक्न आग्रह गरिएको छ । हाल सम्म करिब ८ लाख माथि ?पैया संकलन भएको र सिम्रनको उपचार अस्पतालले निशुल्क गरिदिने बताएपछि आर्थिक संकलन कार्य रोक्न आग्रह गरिएको वडा नं. ३ का अध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले जानकारी दिनुभयो । औषधीको खर्च भने लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
आज मात्रै सामुदायिक रेडियो विजय एफएमले थप १५ हजार ७ सय १५ ?पैया आर्थिक सहयोग गरेको छ । गैडाकोट ५ की कुमारी रेखा पौडेलले ले २ हजार, गैडाकोट ५ कै भवानी टोल विकास संस्थाबाट ८ हजार १ सय ५५, देवचुली पर्वत समाजबाट ५ हजार ५ सय ६० ?पैया सहयोग गर्नुभएको रकम आज विरामीका आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
यसअघि एफएमले नवलपुर सहायता समाज वेल्जियमबाट आएको ५० हजार र एफएमले सञ्चालन गरेको हेल्प लाइनमा संकलित ४५ हजार ७ सय १७ गरि कूल ९५ हजार ७ सय १७
?पैया संकलित रकम विरामीको आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिसकेको एफएमका स्टेशन म्यानेजर श्रीधर उपाध्ययाले जानकारी दिनुभयो ।
यसैविच ढोडेनीवासीह?ले संकलन गरेको ३७ हजार ६ सय ५ ?पैया पनि आजै विरामीका आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । अहिले बालिकाको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको र संकलित सो रकम वालिकाको शिक्षा दिक्षामा तथा औषधी र भविष्य निर्माणमा खर्च गरिने वडाअध्यक्ष तिवारीको भनाइ रहेको छ ।
गैंडाकोट २ मा ठेलामा मःम व्यवसाय गर्दै आएका कृष्ण पौडेल र विष्णु पौडेलकी छोरी सिम्रनको तातो तेलले अनुहारको पुरै भाग, दुवै हात र छातीमा घाउ भएको थियो । ग्राहकलाई मःम दिने बेला छोरीले ग्यासको पाइप तान्दा बालिकाको शरीरमा तेल पोखिन पुगेको थियो । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका कारण उपचारमा कठिनाई भएपछि घाइते बालिकाको उपचारका लागि हेल्पलाइन सेवा सु? गरेको थियो ।